🥇 ▷ Galaxy Watch Active2: Waxaa loogu talagalay inay ka caawiso isku dheelitirka wanaagga isku xirnaanta la xoojiyay ✅
Galaxy Watch Active2: Waxaa loogu talagalay inay ka caawiso isku dheelitirka wanaagga isku xirnaanta la xoojiyay
Qalabka ugu dambeeya ee loo yaqaan ‘smartwatch’ wuxuu qaadanayaa fayo qabka shaqsiyeed ilaa heerka ku xigga wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad ku raaxeysato dabacsanaan ka badan tan iyo weligiiba isku xirnaanta LTE.
Samsung Electronics Co., Ltd. waxay maanta soo bandhigtay Galaxy Watch Active2, oo ah isugeynta ugu dambeysay ee loo yaqaan ‘smartwatch portfolio Galaxy’. Iyada oo qayb ka ah qoyska qoyska, Galaxy Watch Active2 waxaa loogu tala galay agab cusub, dareen leh oo la safeeyey si ay u siiso habeyn dheeri ah hab nololeedka macaamiisha, wanaajiso caafimaadkooda iyo wanaagnaantooda, sidoo kale awood u siiso nolosha ku xiran kaamilnimada.
Galaxy Watch Active2 wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay ku noolaadaan si ka wanaagsan sidii hore laakiin isbeddelo muhiim ah oo maalin kasta dhaca: laga bilaabo gaarista yoolalka wanaaga sida hurdada, jimicsiga iyo maareynta walwalka ilaa u dhammaystiro howlaha si hufan. Haddii aad rabto inaad qaadato waqti xoogaa ah si aad uga fikirto, hesho ogaysiisyada casriyeyn kasta ama wax yar, wax kasta oo ka socda, Galaxy Watch Active2 wuxuu dhammaystirayaa qaab nololeedkaaga wuxuuna bixiyaa waxa farqiga u keenaya. Dhamaan howlahaasna waxaa lagu bixiyaa qaab iyo xarrago.
Suuqa smart smart market si xawli ah ayuu u korayaa Samsung-na waxay ku faraxsantahay inay si joogto ah u ballaariso joogitaankeena qaabab cusub iyo aragti fog, “ayuu yiri DJ Koh, Madaxweynaha iyo Madaxa Shirkadda IT iyo Qeybta Isgaarsiinta Mobilada ee Samsung Electronics. Waxaan isticmaalnay Galaxy Watch Active2, waxaan u sameynay aalad u saamaxeysa macaamiisha inay la wareegaan caafimaadkooda iyo fayo qabkooda, u dhaqaaqaan si xaddidan inta u dhexeysa aaladooda oo aan ku xirno Samsung ecology, si noloshu u fiicnaato oo kuu fududaato ».
Naqshad iyo naqshad shaqsiyeed noloshaada
Galaxy Watch Active2 waxaa loo habeeyay si quruxsan oo loo habeyn karo. Galaxy Watch Active2 wuxuu ku yimaadaa labo cabbir oo kaladuwan (44 mm iyo 40 mm dhexroor) iyo labo qaab: aluminium khafiifa oo leh hargab mareyso ah oo loo yaqaan ‘Foroorostomer band’ (FKM), iyo bir adag oo aan fiicnayn oo leh xarig maqaar ah. Saacadaha smart waxaa lagu hagaajin karaa iyada oo leh xulashooyin dheeraad ah oo dheeri ah oo suuf smart iyo wejiga daawashada.
Galaxy Watch Active2 wuxuu soo bandhigayaa cusbooneysiin cusub oo ka sameysan gunta bartayada gaarka ah wuxuuna noqdaa mid dijital ah si loo kordhiyo waxqabadka marka la socdo, marka lagu daro kordhinta cabirka shaashadda. Hadda, si toos ah shaashadda Super AMOLED ee quruxda badan, xargaha taabashada wareegga ayaa wareegga labada saac iyo dhanka saacadda ah si loo hormariyo shaashadda. Tani waxay kuu fududaynaysaa xulashada codsiyada aad ugu jeceshahay. Intaa waxaa sii dheer, kor u qaadida Mid ka mid ah interface-ka adeegsadaha wuxuu bixiyaa khibrad sahlan, saafi ah oo dabiici ah oo adeegsige ah.
Iyo kuwa doonaya saacad leh xarrago isku mid ah oo lagu garto, ayaa hadda ku habboonayn kara taleefankooda ‘Galaxy Watch Active2’ marka loo eego dharkaaga oo leh My Style, algorithm midabka ka soosaarka midabka. Waxaa laga heli karaa dalabka ‘Galaxy Wevable’, kaliya sawir ka qaad kooxdaada, dooro shan nooc oo midabbo kala duwan ah iyo garaacista saacaddaada aad wax ku beddeleyso ilbiriqsiyo. Waad isku dari kartaa qaabkaaga shaqsiyeed maalin kasta, ama badbaadin kartaa qaabka aad jeceshahay waqti dambe.
Saaxiibka ugu fiican himilooyinkaaga caafimaadkaaga
Galaxy Watch Active2 sidoo kale waxay u adeegtaa hage sidii kor loogu qaadi lahaa caafimaadka iyo fayoobaanta iyadoo la siinayo macluumaad wax ku ool ah oo kaa caawin kara inaad sameyso xulashooyin qaab nololeed oo hagaagsan oo ku saabsan cuntadaada, jimicsiga, caafimaadka maskaxda, hurdada iyo waxyaabo badan.
Tusaale ahaan, jimicsi, saacadaha caqliga leh waxay gacanta ku hayn karaan wax ka badan 39 hawlagal oo ay ku dhaqaaqi karaan toddobo ka mid ah si otomaatig ah, oo ay ku jiraan orodka, socodka, baaskiil wadista, dabaasha, rowing, adeegsiga mashiinka elliptical iyo qabashada dhaqdhaqaaqa firfircoon. Tababbarka orodka ee la cusbooneysiiyay, waxaad ku xakameyn kartaa xawaarahaaga orodka waqtiga dhabta ah waxaadna ku raaxeyn kartaa toddobo barnaamijyo xirfadeed oo kala duwan si ay kaaga caawiyaan gaarista yoolalkaaga. Daawada loo yaqaan ‘Galaxy Watch Active2’ ayaa sidoo kale gadaal ka mideysa dareemayaal caafimaad oo cusub oo dhabarka dambe ah taas oo awood u siineysa akhriska xawaaraha. Sidan, waxaad si dhakhso leh u heleysaa macluumaad si aad u kordhiso jimicsigaaga oo aad ugu socoto xawaaraha saxda ah.
Galaxy Watch Active2 sidoo kale waxay kaa caawineysaa inaad la socoto heerarka walaaca waqtiga dhabta ah iyada oo loo marayo Samsung Health, barnaamijkeena caafimaad iyo fayoobaanta muuqaalka. Waxay kaloo bixisaa marin loo helo barnaamijyada hagitaan ee hagida iyada oo la adeegsanayo is-dhexgalka Calm, dalabka hogaaminta hurdada iyo ka fiirsashada, oo hada lagu heli karo Ingiriis, Jarmal iyo Isbaanish. Iyo algorithms falanqaynta hurdada waxay kaa caawineysaa inaad ka shaqeyso qaababka hurdo caafimaad qabta (illaa afarta marxaladood oo hurdo ah), kaas oo kaa caawinaya inaad ka bogsatid habeenkii oo kuu diyaariya maalinta ku xigta.
Si dhammaystiran u ballaariso qaab nololeedkaaga ku xiran qoyska reerka Galaxy
Iyadoo la adeegsanayo ‘Galaxy Watch Active2’ waxay kuu sahleysaa inaad ku xirnaato noloshaada iyo aaladaha kale, xitaa adigoo ka maqnaanaya guriga ama xafiiska. Galaxy Watch Active2 oo leh isku xirnaanta LTE waxay kuu oggolaaneysaa inaad sameyso oo aad ku hesho wicitaanno si xor ah saacadda aad u hesho, uhesho shabakadaha bulshada adiga oo taabanaya fartaada oo aad u hesho is-dhexgal badan oo ku saabsan waxyaabahaaga aaladahaas. Hadda waad ku jawaabi kartaa ama waxaad jeceshahay tweet oo xitaa waad daawan kartaa muuqaal gaaban ama fiidiyoowga tooska ah ee gacantaada. Xitaa waad ku safri kartaa adduunka kalsooni weyn, maadaama Galaxy Watch Active2 ay taageerto turjumaada codka iyo qoraalka waqtiga dhabta ah in kabadan 16 luqadood. (
Qaab kale oo loo fududeeyo isku xirnaanta xitaa fudeyd ayaa ah isbahaysigayada Spotify (gal cinwaanka Samsung-ka oo ah midka keliya ee laga galo taleefankaaga ama taleefankaaga). Galaxy Watch Active2 oo si deggan u raadso muusikadaada Spotify, oo leh waayo-aragnimo dhegeysiga joogtada ah. Galaxy Watch Active2 wuxuu ku siinayaa waayo-aragnimo ku saabsan is-dhexgalka qumman ee aaladda isla markaana wuxuu fududeynayaa galaangal u yeelashada muusikada iyo farriimaha.
Qeyb isku dhafan oo ka mid ah deegaanka noolaha Galaxy
Iyada oo qayb ka ah qoyska Galaxy, Galaxy Watch Active2 waxay keenaysaa waxa ugu fiican ee deegaanka deegaanka Samsung ka Samsung ilaa saacadaha smart ee kuwa doonaya inay wax walba sameeyaan. Tusaale ahaan, marka Galaxy Watch Active2 lagu soo xidho taleefankaaga casriga ah ee Galaxy, Kaamirooyinka loo yaqaan ‘Camera Camera Controller’ (oo ah Galaxy Watch Active2) wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sawirro ka qaaddo, bilawdo duubista fiidiyowga, dib u eegista duubista saacadda, jajabka muraayadaha hore iyo kan dambe, set saacad ka dibna hubi sawirka ama fiidiyaha ugu dambeeya Wax kasta oo gacantaada ku jira.Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa Wireless PowerShare taleefankaaga casriga ah ee Galaxy si aad ugu dallacdo saacadahaaga smart si hab fudud oo dareen leh.
Intaa waxaa sii dheer, dhammaan adeegyada Samsung ee aad ku hesho la-noolaanshaha deegaanka ee “Galaxysuch” sida Samsung Health, SmartThings, Samsung Pay (iyo in ka sii badanba), waa kuwo si dhammaystiran isugu dhafan saacaddaada iyo aaladahaaga oo dhan.Tusaale ahaan, waxaad u isticmaali kartaa Bixby si aad ugu socoto socodkaaga, aad u bilowdo jimicsi ama hubi cimilada .. Dabcan, Wax kasta oo aad saacaddaada ku daawatid waxaa ilaaliya tikniyoolajiyadda loo yaqaanno Knox.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Galaxy Watch Active2, booqo news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com.
Midab Aluminium: Cloud Cloud, Aqua Black, Dahab dahab ah oo leh forooroelastomer (FKM) bir aan fiicnayn: Qalin, Madow, Dahab leh suunka maqaarka
Cabirrada iyo culeyska Kiisaska Aluminium, 44 moodhadhka 44 mm: 44 x 44 x 10.9T, 30 g Kiimikada aluminium, moodooyinka 40 mm: 40 x 40 x 10.9T, 26 g Kiiska bir-la’aanta ah, 44 mm lagu daydo: 44 x 44 x 10.9T, 44 g Bakin steel steel, moodooyinka 40 mm: 40 x 40 x 10.9T, 37 g * LTE moodada oo laga heli karo kaliya birta birta ah
shaashadda Moodooyinka 44 mm: Super AMOLED 360 x 360 1.4 inji (34 mm), Had iyo jeer Soo Bandhigo Midab buuxa, Corning® Gorilla® Glass DX +Moodooyinka 40 mm: Super AMOLED 360 x 360 1.2 inji (30 mm), Had iyo jeer Soo Bandhigo Midab buuxa, Corning® Gorilla® Glass DX +
suunka Moodooyinka 44 mm: 20 mm (isweydaarikara) 40 mm moodooyinka: 20 mm (isweydaarsiga)
Durbaan Moodooyinka 44 mm: 340mAh 40 mm moodooyinka: 247mAh
Xusuusta 768 MB + 4 GB, * 1.5 GB + 4 GB* Moodooyinka LTE oo keliya
Isku xirnaanta LTE *, Bluetooth® 5.0, Wi-Fi b / g / n, NFCA-GPS / GLONASS / Galileo / Beidou (8) * Isku xirnaanta LTE ayaa kaliya laga heli karaa moodooyinka LTE
Xasaasiga Kormeeraha garaaca wadnaha (oo leh 8 foroodiyaal ah), electrocardiogram (ECG), mitir-mitir (cabir ilaa 32 g oo xoog ah), jimicsi-gaas, barometer, iftiin joogga ah
Load Kordhinta fiilada korantada ee WPC
Cimri dherer 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810G
Wada-noolaansho Android: Android 5.0 ama ka sareeya, RAM 1.5 GB ama ka sareeya: iPhone 5 iyo wixii ka sareeya, macruufka 9.0 ama wixii ka sareeya